Vidin-tsolika: antony tsy mampidina azy ny fitantanana ny varotra | NewsMada
Vidin-tsolika: antony tsy mampidina azy ny fitantanana ny varotra
Mampametram-panontanian’ny maro momba ny vidin-tsolika eto amintsika, izay tsy misy fiovana nefa ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena latsaka ambany be: 30 dolara ny baril amin’izao krizin’ny Coronavirus izao. Ny fanjakana rahateo tsy mitondra fanazavana momba izany. Tompon’andraikitra iray momba ny varotra ao amin’ny orinasa mpaninjara solika iray no nitondra fanazavana mikasika ny antony tsy mampidina ny vidin-tsolika eto amintsika.
Voalohany, efa komandy tany amin’ny volana desambra 2019 na janoary 2020 ny tonga eto an-toerana amin’izao fotoana izao, izay marihina fa solika efa voadio, hafa ny vidiny. Tamin’izany fotoana izany tsy mbola nampidina ny vidin-tsolika ny Coronavirus.
Antony lehibe faharoa, tsy maintsy hidina ny sandam-bola Ariary noho izao krizy izao, nefa tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsolika rehefa mahazo vahana ny fanarenana ny toekarena maneran-tany. Azo antoka fa hihoatra ny 100 dolara ny baril, raha ny tombatombana nataon’ireo mpanadihady manokana momba ny vidin-tsolika.
Fahatelo, lafo ny fitaterana famatsiana solika manerana ny Nosy. Miainga avy any Toamasina, tonga eto Antananarivo izay vao mankany amin’ny faritra maro. Tsy mbola misy fantsona mitondra solika eto Madagasikara fa fiara vaventy mpitatitra daholo. Tsy mora ny fikojakojana ireny fiara ireny ary faran’izay lafo ny fiantohana azy Mbola misy antony hafa …